Esercitati in atti casuali di gentilezza e vedi il volto di Dio | Ilblogdellafede
Mee ụdị obiọma na-enweghị atụ, hụ ihu Chineke
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 2, 2020 Ọgọstụ 2, 2020
Chineke anaghi elele mmebi iwu anyi anya dika o jiri onwe ya na ndi ozo; Chineke abụghị onye prọfesọ kọleji nke gbara ọsọ "n'okporo ụzọ".
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ana m akatọkarị ụfọdụ ndị isi n’otu n’ime ndị isi Chọọchị. N’ezie, ụfọdụ ndị prekụk emesiwo ndị aka ha dị ọcha obi ọjọọ, tinyere enweghị obi ebere na ịdị njikere ikpuchi ihe ọ bụla nwere ike ibo ha ebubo ma ọ bụ menye Chọọchị ihere. Mmebi iwu dị egwu nke ndị ikom a emewo ka ozi ọma Katọlik zie ozi na-agaghị ekwe omume.
Nmehie ha akpatawo nsogbu ọzọ dị oke njọ, nke ahụ bụ - n ’ịgụnye - mmejọ anyị pere mpe megide ndị ọzọ bụ ihe jọgburu onwe ya na nke adịghị mma. Anyị nwere ike gosipụta ihe anyị mere site na iche, “Ọ bụrụ na ekwuru m onye ezinaụlọ nke na-enweghị uche ma ọ bụ duhie onye anyị na-amaghị? Nnukwu ego! Lee ihe bishọp ahụ mere! “Ọ dị nfe ịhụ etu usoro a ga - esi mee; ka emechara, anyi bi n’ime ndi mmadu na agba anyi ume inyocha onwe anyi na ndi ozo. Ma Chineke anaghị atụle ajọọ omume anyị ka ọ na-atụnyere onwe ya na ndị ọzọ; Chineke abụghị onye prọfesọ kọleji nke gbara ọsọ "n'okporo ụzọ".
Ọ bụrụ na anyị hụrụ ndị ọzọ n'anya - ụdị omume ọjọọ anyị - nwere ike imebi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị ajụ igosi ọmịiko, ọmịiko, nghọta na obiọma n'ebe ndị gbara anyị gburugburu, ànyị nwere ike iji obi eziokwu kpọọ onwe anyị Ndị Kraịst n'ụzọ ọ bụla bara uru? Ànyị na-ezisa ozi ọma ma ọ bụ na-achụpụ ndị mmadụ na Chọọchị kama? Anyị nwere ike na-ekele onwe anyị na anyị maara banyere okwukwe na nkwanye ugwu, ma anyị kwesịrị ịtụle akwụkwọ ozi mbụ nke St. Paul degaara ndị Kọrịnt:
Ọ bụrụ na m na-asụ asụsụ mmadụ na ndị mmụọ ozi, mana enweghị m ịhụnanya, abụ m gong ma ọ bụ ụda dị elu. Ọ buru kwa na enwerem ike ibu amuma, amaghim ihe-omimi nile na ihe-ọmuma nile, ọ buru kwa na enwerem okwukwe nile, iwepu ugwu, ma enweghm ihu-n'anya, abughim ihe.
Anyị nwere ya na Akwụkwọ Nsọ: okwukwe enweghị ịhụnanya abụghị ihe efu, kama ọ bụ ịhụ ụzọ iru uju nke ihe nwute. O yiri ụwa anyị taa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mba niile nọ n'ụwa na-agbagha site na nsogbu na ụdị ọgba aghara dị iche iche na-eyi ka ọ na-akawanye njọ kwa ụbọchị, mana ha niile na-esite na otu ihe kpatara ya: anyị enweghị ịhụnanya. Anyị ahụghị Chineke n'anya; n'ihi nke a, anyị bụ ndị agbata obi anyị ihe ojo. Ikekwe anyị echefuwo na ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya na maka onwe anyị maka ihe ahụ - sitere n'ịhụnanya nke Chineke mana eziokwu na-enweghị mgbagha bụ na ịhụ Chineke na ịhụnanya maka ndị agbata obi n'anya ruo mgbe ebighi ebi. jikọọ.
Ebe ọ dị mfe ichefu eziokwu a, anyị kwesịrị ịmaliteghachi echiche anyị banyere onye agbata obi anyị.
Anyị nwere nhọrọ. Anyị nwere ike ịhụ ndị ọzọ ka enwere naanị maka ọ pleasureụ na uru anyị, nke bụ isi okwu a: Gịnị ka ọ ga - emere m? N'ọdịbendị ndị na-akpali agụụ mmekọahụ dị ugbu a, enweghị obi abụọ ọ bụla na echiche a bara uru wakpo anyị. Echiche a bụ ọgbụgba mmiri maka omume ojoo na-enweghị isi.
Mana, dị ka ozi nke Ndị Rom 12:21 si dị, anyị nwere ike iji obiọma merie ajọ omume. Anyị ga-ahọrọ ihu n’onye ọ bụla dị ka ọrụ pụrụ iche na ọrụ ebube Chineke nke ọ bụ. A kpọrọ anyị Ndị Kraịst ka anyị lelee ndị ọzọ, n'okwu Frank Sheed, "ọ bụghị maka ihe anyị ga - enweta, kama maka ihe Chineke tinye n'ime ha, ọ bụghị maka ihe ha nwere ike imere anyị, kama maka ihe dị n'ime ha. ". Sheed kọwara na ịhụ ndị ọzọ n'anya “gbanyere mkpọrọgwụ n'ịhụ Chineke n'anya maka onye ọ bụ.”
N'akụkụ nke amara, nke a bụ Ntụziaka maka iweghachi ọrụ ebere na obiọma - ịhụ onye ọ bụla dịka ihe okike pụrụ iche nke Chineke Onye ọ bụla gbara anyị gburugburu bụ ihe dị oke mkpa nke Chineke hụrụ n'anya site na mgbe ebighi ebi. Dịka Saint Alphonsus Liguori na-echetara anyị, “ofmụ mmadụ, ka Onye-nwe kwuru, cheta na m hụrụ gị n'anya. A mụghị gị amụ, ụwa n'onweghịkwa onwe m, ọbụlagodi na ahụrụ m gị n'anya. "
N’agbanyeghi mmejọ ọbụla ị mere n’ime ndụ gị, Chineke hụrụ gị n’anya site na mgbe ebighi ebi. N'ime ụwa nke ajọ omume juputara, nke a bụ ozi na-agba ume anyị ga-agharịrị - ka ndị enyi, ezinụlọ, ndị bịara abịa. Ma onye ma? N’ime afọ iri abụọ, ikekwe mmadụ ga-abịakwute gị, gwa gị ụdị ụdị ike ị metụtala ndụ ha.
← Na post gara aga Gara aga post:Ndịàmà hụrụ ahụ nwa Jesus Jesus n’aka Padre Pio
Ọzọ Post → Post ozo:Ezigbo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, unu niile na-akparịta ụka ma pụọ ​​iche "maka ndị kwere nkwa"